कोशी अस्पतालमा कोरोना शंकास्पद बिरामीको मृत्यु - बडिमालिका खबर
कोशी अस्पतालमा कोरोना शंकास्पद बिरामीको मृत्यु
कोरोना भाइरसको आशंकामा विराटनगरको कोशी अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका एक मारवाडी समुदायका पुरुषको शुक्रबार मृत्यु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका -९ का ५८ वर्षीय जयप्रकाश अग्रवालको बिहान ९ :१५ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. चुमनलाल दासले बताए ।
मृतकमा कोरोनाको आशंका गरिएका कारण स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको उनको भनाइ छ । रिपोर्ट आइसकेपछि मृतकमा कोरोना भए÷नभएको पत्ता लाग्ने डा. दासले बताए । उनले रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा दाहसंस्कारका लागि परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाइने र पोजेटिभ आएमा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई बुझाइने जानकारी दिए ।
दुई वडाध्यक्षसहित जुवाको खालबाट १५जना पक्राउ